Jamaica "Inoitisa Kufamba" neNew Innovations kuWorld Expo 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica "Inoita Kuti Ifambe" neNew Innovations kuWorld Expo 2020
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Jamaica "Inoita Kuti Ifambe" neNew Innovations kuWorld Expo 2020
Jamaica kuWorld Expo
Jamaica Tourism yakagadzirirwa kuratidzira zvigadzirwa zvayo zvitsva uye zvigadzirwa paWorld Expo 2020 Dubai muUnited Emirates (UAE). Dingindira reJamaica Pavilion paWorld Expo 2020 nderekuti: "Jamaica Inoitisa Kufamba," zvichireva kuti ingave mimhanzi kana chikafu kana mutambo, Jamaica inofamba uye inobatanidza nyika.
Vatori vechikamu paWorld Expo vanowana kuravira kweJamaica panzvimbo yavo inotonhorera.
Iyo pavilion inoratidza tsika yeJamaica uye danho rekushandura nekuunza chitsuwa ichi senzvimbo yezvigadzirwa inobatanidza maAmerican nenyika dzese.
Pane pavilion ine nzvimbo nomwe, vashanyi vachakwanisa kuona zvinoonekwa, manzwi, uye manakiro eJamaica.
Iyo Jamaica Pavilion yakatove yakatumidzwa seimwe ye "inotonhorera zvakanyanya" paWorld Expo 2020 Dubai.
“Zvakange zvakakosha kuti Jamaica inomiririrwa pamusangano wepasirese uyu kuratidzira zvakare hupfumi hwetsika uye zviwanikwa zvakanaka. Vachapinda muWorld Expo vanozowana raviro yekuenda uye vanonzwisisa kuti sei tiri 'Mwoyo weNyika,' ”akadaro Donovan White, Director we Tourism kuJamaica.
Donovan White, Director we Tourism kuJamaica
Iyo yakasarudzika yeiyo pavilion inoratidza tsika ye Jamaika uye danho rekushandura nekuunza chitsuwa ichi senzvimbo yekushandisa inobatanidza maAmerican nenyika dzese. Iyo pavilion ine nzvimbo nomwe, dzinozogonesa vashanyi kuona zvinoonekwa, ruzha, uye manakiro eJamaica; kuti Jamaica inofambisa sei nyika; uye ushande sehukama hwehukama.
Iyo Pavilion ine inorarama mimhanzi studio iyo inoonesa vamwe vevanoonekera vemuJamican vaimbi, maartist uye vagadziri; uko vanhu vanogona kuteerera mimhanzi yeJamaican, vagadzire yavo yekutamba, uye vibe vibe yechisimba chitsuwa vachinakidza chaiwo uye echinyakare madhishi kubva kune vamwe vepamusoro veJamaican Chefs vachishandisa yakasanganiswa misanganiswa yemakwenzi nezvinonhuwira. Chimwe chakasarudzika chakasarudzika ndeye Navigation App kuti uwane iyo chaiyo yekushanya uye kuongorora Jamaica senzvimbo yekushanya.
Chiratidziro cheDubai icho chakange chakarongerwa kuitika gore rapfuura chichaitika kubva muna Gumiguru, 1, uye chichaenderera kusvika munaKurume 2021, 31. Chiitiko chakamiswa nekuda kwekupararira kwe COVID-2022 pasi rese. Expo 19 ndiyo yekutanga kuitirwa kuMiddle East, Africa, neSouth Asia uye inoitirwa kufambisa nhaurirano yepasirese, kuunza kuupenyu dingindira guru re "Kubatanidza pfungwa, kugadzira ramangwana." World Expo inotarisirwa kukwezva kushanya kwemamirioni makumi maviri neshanu panguva yemwedzi mitanhatu.